မတရားဖမျးဆီးထောငျခခြံထားရတာ (၁)နှဈနှငျ့(၁)လ တိတိ ရှိသှားပွီတဲ့ မဝငျးမငျးသနျး ကို ဂုဏျပွုစကားပွောလာတဲ့ အမာခံပရိတျသတျတဈဦ – Shwe Likes
မတရားဖမျးဆီးထောငျခခြံထားရတာ (၁)နှဈနှငျ့(၁)လ တိတိ ရှိသှားပွီတဲ့ မဝငျးမငျးသနျး ကို ဂုဏျပွုစကားပွောလာတဲ့ အမာခံပရိတျသတျတဈဦ
Shwe | May 7, 2022 | Celebrity | No Comments
အမတေဈခုသမီးတဈခု ဘဝနဲ့ မှေးမိခငျကို သမ်မာအာဇီဝကကြ ရိုးသာွးေ ဖာငျ့မှနျစှာနဲ့ လုပျကြှေွး ပုစုနတေဲ့ ဒီအမြိုးသမီး…
Woman Empowerment ကို ရောကျတဲ့ေ နရာ ရတဲ့ ကဏ်ဍကနေ Speak Outလုပျပွီး မွနျမာအ မြိုးသ မီးထုရဲ့ ရှဆေ့ော ငျလမျးပွအဖွဈ အမွဲရှိပေးခဲ့ တဲ့ ဒီအမြိုးသမီး…
မတူကှဲပွား တဲ့ဖွဈတညျမှု အသီးသီးက LGBTတှေ အပျေါ Conservative အဆနျဆုံး ဝနျးကငျြဖွဈတဲ့ မွနျမာလူထုရဲ့ ခှဲခွားနှိမျခြ ဆကျဆံမှုတှကေိုလညျး ဆပျဆပျထိမခံ မိခငျတဈေ ယာကျသဖှယျ ရှကေ့နေ မားမား မတျမတျ ရပျတညျပေးခဲ့တဲ့ ဒီအမြိုးသမီး…
ခှဲစိတျပွုပွ ငျမှုတှမေပါပဲ မိမိအသားအေ ရ၊အသားအရောငျ ၊ရုပျရညျ တို့ကို မိမိ ကိုယျတိုငျ သဘာဝအတိုငျး ဂရုစိုကျနထေိုငျပွီး မိမိဖွဈတညျမှုတိုငျးကို တနျဖိုးထားတတျေ အာငျ အမွဲသငျပွခဲ့တဲ့ ဒီအမြိုးသမီး
မွနျမာေ တှအရိုးစှဲနတေဲ့ “ပိနျတယျ၊ ဝတယျ၊မဲတယျ၊ဖွူတယျ ၊ပုတယျ၊ရှညျတယျ ၊နှဖူးပွောငျတယျ၊လကျမော ငျးတုတျတယျ၊အကွောပွ တျတယျ” စတဲ့ လူတ ဈယောကျရဲ့ ပွုပွ ငျလို့မရ တဲ့မှေးရာပါအသှငျအွ ပငျလက်ခဏာတှကေို ခှဲခွားလှောငျပွောငျသရျောတဲ့ Body Shaming ကိုလညျး အမုနျးခံ တိုကျခိုကျတှနျးလှနျပေးခဲ့တဲ့ ဒီအမြိုးသမီး…
အရေးကွုံလာတဲ့ အခါမှာလညျး အမှနျတရားအတှကျ မကွောကျမလနျ့ မဆိုငျးမတှ ပရိသတျပွညျသူနဲ့ တဈသားတညျး ရှဆေုံ့းကနေ ရပျတ ညျပေးခဲ့တဲ့ ဒီအမြိုးသမီး…
ဒီလိုလေး စားဖှယျ မွနျမာအမြိုးသ မီးတဈဦးဖွဈတဲ့ “Beauty Blogger ဝငျးမငျးသနျး” ဟာ ပွညျသူအားလုံးရဲ့ အနာဂတျအတှကျ အမှနျတရားလ မျးမပျေါ ရဲရဲကွီးလြှောကျလှမျးေ နစဉျလမျး ခုလတျမှာပဲ မတရားသဖွငျ့ ဖမျး ဆီးခြုပျနှောငျခွငျးကို ခံခဲ့ရပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ သူမအနဈနာခံ အကဉျြးစံနရေတဲ့ ရကျပေါငျးဟာ ဒီနမှေ့ာဆို (၁)နှဈနဲ့ (၁)လ တိတိ ပွညျ့ခဲ့ပါပွီ။
ဒီအမြိုးသမီးေ ကွာငျ့ မိမိအသား အရကေို တနျဖိုးထားပွီး Skincare လုပျတတျလာကွတယျ။ ဒီအမြိုးသမီးကွောငျ့ ရှိတာနဲ့လှေ အာငျ လိပျပွာသနျ့သနျ့ ဘယျလိုနထေိုငျရမလဲဆိုတာ သိလာကွတယျ။ ဒီအမြိုးသမီးကွောငျ့ လူနမှေုအဆငျ့အတနျးကအစ ဘယျလိုနရေ မယျ ဘယျလိုမနရေဘူး စတဲ့ အသေးစိတျေ လးတှကေအစ နားလညျသဘောပေါကျလာကွတယျ။ ဒါဆိုရငျ ထောငျထဲမှာ အနဈနာခံ နပေေးနရှောတဲ့ သူမကို အမွဲ ကြေးဇူးတငျ သတိရမနသေငျ့ဘူးလား? ဒီအမြိုးသမီး အမွနျဆုံးလှတျွေ မာကျဖို့အတှကျ ရပေျေါဆီ life style ထဲ တိုးမဝငျပဲ တလရ အတှကျ ကြှနျတျောတို့တဈတှေ နစေ့ဉျတာဝနျကြေေ ပးမနသေငျ့ဘူးလား?
ဒါ့အပွငျ သူမဟာ ကနျြးမာရေး အခွအေနအေခြို့ွေ ကာငျ့ ထောငျတှငျးမှာပဲ ဆေးကုသမှု ပုံမှနျခံယူနရေပွီး ဆေးပုံမှနျသော ကျနရေတယျ လို့ သိထားရတာေ ကွာငျ့ သူမရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနေ သကျသာကောငျးမှနျပွီး ပွနျလညျကြ နျးမာလာစဖေို့အ တှကျကိုလညျး ကြှနျတျောတို့တဈေ တှ မမမေ့လြော့ အထူးဆုတော ငျးပေးကွဖို့လိုပါတယျ…
“လူမုနျးမြားပါေ စ မှနျတဲ့ဘကျကပဲ ရပျတညျမယျ… ကိုယျမှနျတယျဆိုရငျ တဈကမ်ဘာလုံးနဲ့ တဈယောကျဖွဈနပေါစေ ရငျဆိုငျရဲတယျ…” ဆိုတဲ့ အာဂအမြိုးသမီး Beauty Blogger ဝငျးမငျးသနျး ရဲ့ ထောငျတှငျးအ ကဉျြးရကျ ၁နှဈနဲ့၁လပွညျ့မှာ သူမကို လှမျးဆှတျတမျးတ သတိရခွငျး မြားစှာဖွငျ့ ဒီပိုဈ့ေ လးကို တငျပေးလိုကျပါတယျ”
ပွညျသူအခြ ဈတျော ပွညျသူ့ Blogger မဝငျးမငျးသ နျးတဈယောကျ ဘေးကငျးကနျြး မာစှာနဲ့ ခလုတျမထိဆူးမငွိပဲ အမွနျဆုံး ပွနျလညျ လှတျမွောကျခှငျ့ရစဖေို့ အစဉျဆုတောငျးလကျြ….. Credit;
အမေတစ်ခုသမီးတစ်ခု ဘဝနဲ့ မွေးမိခင်ကို သမ္မာအာဇီဝကျကျ ရိုးသာြးေ ဖာင့်မှန်စွာနဲ့ လုပ်ကျွေြး ပုစုနေတဲ့ ဒီအမျိုးသမီး…
Woman Empowerment ကို ရောက်တဲ့ေ နရာ ရတဲ့ ကဏ္ဍကနေ Speak Outလုပ်ပြီး မြန်မာအ မျိုးသ မီးထုရဲ့ ရှေ့ဆော င်လမ်းပြအဖြစ် အမြဲရှိပေးခဲ့ တဲ့ ဒီအမျိုးသမီး…
မတူကွဲပြား တဲ့ဖြစ်တည်မှု အသီးသီးက LGBTတွေ အပေါ် Conservative အဆန်ဆုံး ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာလူထုရဲ့ ခွဲခြားနှိမ်ချ ဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်း ဆပ်ဆပ်ထိမခံ မိခင်တစ်ေ ယာက်သဖွယ် ရှေ့ကနေ မားမား မတ်မတ် ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီအမျိုးသမီး…
ခွဲစိတ်ပြုပြ င်မှုတွေမပါပဲ မိမိအသားအေ ရ၊အသားအရောင် ၊ရုပ်ရည် တို့ကို မိမိ ကိုယ်တိုင် သဘာဝအတိုင်း ဂရုစိုက်နေထိုင်ပြီး မိမိဖြစ်တည်မှုတိုင်းကို တန်ဖိုးထားတတ်ေ အာင် အမြဲသင်ပြခဲ့တဲ့ ဒီအမျိုးသမီး
မြန်မာေ တွအရိုးစွဲနေတဲ့ “ပိန်တယ်၊ ဝတယ်၊မဲတယ်၊ဖြူတယ် ၊ပုတယ်၊ရှည်တယ် ၊နှဖူးပြောင်တယ်၊လက်မော င်းတုတ်တယ်၊အကြောပြ တ်တယ်” စတဲ့ လူတ စ်ယောက်ရဲ့ ပြုပြ င်လို့မရ တဲ့မွေးရာပါအသွင်အြ ပင်လက္ခဏာတွေကို ခွဲခြားလှောင်ပြောင်သရော်တဲ့ Body Shaming ကိုလည်း အမုန်းခံ တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီအမျိုးသမီး…
အရေးကြုံလာတဲ့ အခါမှာလည်း အမှန်တရားအတွက် မကြောက်မလန့် မဆိုင်းမတွ ပရိသတ်ပြည်သူနဲ့ တစ်သားတည်း ရှေ့ဆုံးကနေ ရပ်တ ည်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီအမျိုးသမီး…
ဒီလိုလေး စားဖွယ် မြန်မာအမျိုးသ မီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “Beauty Blogger ဝင်းမင်းသန်း” ဟာ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အမှန်တရားလ မ်းမပေါ် ရဲရဲကြီးလျှောက်လှမ်းေ နစဉ်လမ်း ခုလတ်မှာပဲ မတရားသဖြင့် ဖမ်း ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူမအနစ်နာခံ အကျဉ်းစံနေရတဲ့ ရက်ပေါင်းဟာ ဒီနေ့မှာဆို (၁)နှစ်နဲ့ (၁)လ တိတိ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။
ဒီအမျိုးသမီးေ ကြာင့် မိမိအသား အရေကို တန်ဖိုးထားပြီး Skincare လုပ်တတ်လာကြတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးကြောင့် ရှိတာနဲ့လှေ အာင် လိပ်ပြာသန့်သန့် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာ သိလာကြတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးကြောင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းကအစ ဘယ်လိုနေရ မယ် ဘယ်လိုမနေရဘူး စတဲ့ အသေးစိတ်ေ လးတွေကအစ နားလည်သဘောပေါက်လာကြတယ်။ ဒါဆိုရင် ထောင်ထဲမှာ အနစ်နာခံ နေပေးနေရှာတဲ့ သူမကို အမြဲ ကျေးဇူးတင် သတိရမနေသင့်ဘူးလား? ဒီအမျိုးသမီး အမြန်ဆုံးလွတ်ြေ မာက်ဖို့အတွက် ရေပေါ်ဆီ life style ထဲ တိုးမဝင်ပဲ တလရ အတွက် ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ နေ့စဉ်တာဝန်ကျေေ ပးမနေသင့်ဘူးလား?
ဒါ့အပြင် သူမဟာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအချို့ြေ ကာင့် ထောင်တွင်းမှာပဲ ဆေးကုသမှု ပုံမှန်ခံယူနေရပြီး ဆေးပုံမှန်သော က်နေရတယ် လို့ သိထားရတာေ ကြာင့် သူမရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ သက်သာကောင်းမွန်ပြီး ပြန်လည်ကျ န်းမာလာစေဖို့အ တွက်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့တစ်ေ တွ မမေ့မလျော့ အထူးဆုတော င်းပေးကြဖို့လိုပါတယ်…
“လူမုန်းများပါေ စ မှန်တဲ့ဘက်ကပဲ ရပ်တည်မယ်… ကိုယ်မှန်တယ်ဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ ရင်ဆိုင်ရဲတယ်…” ဆိုတဲ့ အာဂအမျိုးသမီး Beauty Blogger ဝင်းမင်းသန်း ရဲ့ ထောင်တွင်းအ ကျဉ်းရက် ၁နှစ်နဲ့၁လပြည့်မှာ သူမကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတ သတိရခြင်း များစွာဖြင့် ဒီပိုစ့်ေ လးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်”
ပြည်သူအချ စ်တော် ပြည်သူ့ Blogger မဝင်းမင်းသ န်းတစ်ယောက် ဘေးကင်းကျန်း မာစွာနဲ့ ခလုတ်မထိဆူးမငြိပဲ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခွင့်ရစေဖို့ အစဉ်ဆုတောင်းလျက်….. Credit;
အာဏာသိမျးကာလတိုငျးပွညျမငွိမျသကျတာမို့ (၃)လသာ စာသငျခဲ့ရပမေယျ့ (၄)ဘာသာဂုဏျထူးတဲ့ အောငျမွငျတဲ့တူလေး အတှကျ ဂုဏျယူမဆုံးဖွဈနတေဲ့ သရုပျဆောငျ ဘုနျးလြှံ